အမျိုးသ္မီးများ၏အဆင့်အတန်း၊ နေရာ၊ ရပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုးသ္မီးများအပေါ် ထားရှိသော သဘောထားအမြင်များမှာ ဘာသာတရား အလိုက်၊ ဒေသအလိုက်၊ နိုင်ငံလူမျိုးအလိုက် မတူညီပေ၊၊ အချို့သော ဘာသာနှင့်၊ နိုင်ငံလူမျိုးများတွင် အမျိုးသ္မီးများကို နေရာပေးမှု၊ အရေးပေးမှု၊ အဆင့်ပေးမှု အားနည်းသည်ကို လေ့လာရသည်၊၊ ဆက်ဆံမှုတွင်ပင် အမျိုးသ္မီးများကို နိမ့်ကျစွာဆက်ဆံလေ့ရှိ သည့် ဘာသာတရားများစွာကို တွေ့ရသည်၊၊
မူစလင်ဘာသာ၊ အသီးသီးတို့တွင် အမျိုးသ္မီးများအပေါ် နေရာပေး၊ အဆင့်သတ်မှတ်ပုံခြင်း လွန်စွာ ကွာခြားသည်၊၊ အရှင်၏ ယ္ခုစာတမ်းထဲတွင် အခြားဘာသာများ၏ အမျိုးသ္မီးးများအပေါ် သဘောထားအမြင်ကို အသေးစိတ်မဖော်ပြတော့ဘဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အမျိုးသ္မီးများအပေါ် မည်သို့ မည်ပုံသဘောထားသည်၊ နေရာပေးသည်၊ အဆင့်သတ်မှတ်သည်၊ ဆက်ဆံသည်တို့ကိုသာ ပါဠိစာပေ အထောက်အထားများဖြင့် ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါ သည်၊၊
ကောသလမင်းကြီးသည် တစ်နေ့သောအခါ ဗုဒ္ဓရှင်တော်အထံသို့ ရောက်လာခဲ့သည်၊၊ ဗုဒ္ဓနှင့် စကားပြောနေစဉ် အမတ်တစ်ဦးရောက်လာပြီး၊ ကောသလရှင်ဘုရင်ကို နားနားကပ်၍တီးတိုး လျောက်တင်လိုက်သည်၊၊ မင်းကြီးသည် သတင်းစကားကို ကြားလိုက်ရသောအခါ မျက်နှာမသာ မယာဖြစ်သွားသည်၊၊ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မှ မင်းကြီးဘယ်လိုကြောင့် မျက်နှာမသာမယာဖြစ်သွားရသနည်းဟု မေးသောအခါ၊ မိဗုရားခေါင်ကြီး မလ္လိကာ ဒေ၀ီမှ သ္မီးမိန်းကလေးဖွားမြင်ကြောင်း သိလိုက်ရသောကြောင့် စိတ်နှလုံးမသယာမယာ ဖြစ်ရပါသည်ဟု လျောက်တင်လေသည်၊၊
မင်းကြီး အင်္ဂါ(၄)မျိုးနှင့်ပြည့်စုံလျင် အမျိုးသ္မီးသည်အမျိုးသားနှင့်တန်းတူ မြင့်မြတ်သူဖြစ်သည်ဟု ညွှန်ပြလိုက်ပါသည်၊၊ မြင့်မြတ်သည့် အမျိုးသ္မီး တို့၌ရှိသည့် အင်္ဂါလေးမျိုးမှာ--
(၂) ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းခြင်း၊
(၃) နှစ်ဘက်မိဘကို ရိုသေတတ်ခြင်း၊
(၄) လင်သားအပေါ် အမျိုးသမီးတာဝန်ကျေပွန်ခြင်း၊ တို့ဖြစ်သည်၊၊ ဤအင်္ဂါလေးမျိုးတိုးတက်အောင် ညွန်ပြသွန်သင်ပြီး၊ သမီးမိန်းကလေးများကို ကောင်းစွာနေရာပေးသင့်သည်ဟု ဗုဒ္ဓရှင်တော်မှ ကောသ လမင်းကြီးအား မိန့်တော်မူပါသည်၊၊
ဖော်ပြသည့် ဇာတ်လမ်းကိုသုံးသပ်ကြည့်လျင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ အမျိုးသ္မီးအမျိုးသား ခွဲခြားမှုမရှိ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် အသိညာဏ်အပေါ်အခြေခံ၍ အမျိုးသ္မီးများကို ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံ၊ နေရာပေးထားသည်ကို လေ့လာရရှိနိုင်သည်၊၊
အခြားဟောပြောချက် တစ်နေရာတွင်မူ အနုစိတ်လွန်းသည့် ပြဿနာများကို အဖြေရှာရာတွင် အမျိုးသ္မီးများ၏ အသိညာဏ်ပါးနပ်မှုသည် အမျိုးသားများထက်သာလွန်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်၊၊ ဤဖော်ပြချက်မှာ အမျိုးသ္မီးတို့၏ ညာဏ်ပညာထက်မြက်မှုကို ထင်ဟပ်စေပါသည်၊၊
ထင်ရှားမိန့်မှာ၊ ဥဒါန်းလာ၏၊၊ (မဃဒေ၀ လင်္ကာ)
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ဟောပြောထားသည့် အခြားဇာတ်လမ်းတစ်ခုတွင်မူ “ဘုန်းကံမရှိသော အမျိုးသားသည် ဘုန်းကံကြီးသည့် အမျိုးသ္မီးကို မရရှိနိုင်ကြောင်း”ပါရှိလေသည်၊၊ သို့ဆိုလျင် အချို့အမျိုးသ္မီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပင် ဘုန်းကံကြီးကြောင်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်၊၊
ဟိန္ဒူ-ဗြဟ္မဏ၀ါဒတွင် အမျိုးသ္မီးများသည် သေလွန်သွားကြသည့် ဆွေမျိုးမိဘများအတွက် ကုသိုလ်ပြု၍ အမျှဝေခွင့်ကို မရရှိပေ၊ အကြောင်းမှာ အမျိုးသ္မီးတို့ပေးဝေသော အမျှကိုသေလွန်ပြီး သူများက “သာဓု”မခေါ်ဆိုနိုင်သောကြောင့်ဟု ဆိုသည်၊၊ ဤ၀ါဒကို လက်မခံလို၍ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မှ “နန္ဒနီသုတ်”တွင် သေလွန်သူ ဆွေမျိုး၊ မိဘ၊ မိတ်ဆွေများအတွက် အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ အမျိုးသ္မီးဖြစ်စေ အမျှဝေနိုင်ကြောင်း၊ သေလွန်ပြီးသူများ သည်လည်း ပေးဝေသည့်အမျှကို ဧကန်ရရှိပါကြောင်း သင်ပြ ထားပါသည်၊၊
ဘာသာရေးကျင့်ဝတ်များ၊ ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသ္မီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခွင့်မရသော ကမ္ဘာ့ ဘာသာပေါင်း များစွာရှိပါသည်၊၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွင်မူ အမျိုးသ္မီးများသည် သက်တော်ထင်ရှား ဗုဒ္ဓကိုယ် တော်တိုင်ကိုပင်လျင် ဆွမ်းဆက်ကပ်ခွင့်၊ ရင်းနှီးစွာနေထိုင်ခွင့်ကို ရရှိပါသည်၊၊ ၀ိသာခါ ကျောင်း အမကြီးနှင့် ဗုဒ္ဓရှင်တော်တို့သည် အမျိုးသ္မီးတို့၏အတွင်းရေးများကို အခါအားလျော်စွာ ဆွေးနွေးလေ့ရှိ ကြောင်း “၀ိနယပိဋက”တွင် ဖော်ပြ ပါသည်၊၊ “နကုလမာတာ+နကုလပိတာ”ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မြတ် စွာဘုရားကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့လျင်တွေ့ခြင်း မြတ်စွာဘုရား ရှင်အား သာမန်ရင်းနှီးသူများကိုကဲ့သို့ ဖက်လှဲတကင်း နှုတ်ဆက်သမှု၊ ပြုကြသည်ဟု ဖော်ပြထားပါ သည်၊၊
ထိုဇနီးမောင်နှံကို မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ အပြစ်တစ်စုံတရာ မတင်သည့်အပြင် “ဤဇနီးမောင်နှံသည် ငါဘုရားရှင်နှင့် ရင်းနှီးသူများအထဲတွင် အရင်းနှီးဆုံးသူများဖြစ်သည်ဟု ဧတဒဂ်ဘွဲ့ထူး”ကိုပင် ပေးအပ်တော်မူပါသည်၊၊ ဤသာဓကကိုထောက်ဆ၍ ယနေ့ခေတ်အခါတွင် တချို့သော စေတီ၊ သိမ်၊ ကျောင်း၊ ဘုရား များအပေါ်သို့ အမျိုးသမီးမတက်ရ၊ မကိုင်တွယ်ရ၊ မထိရ၊ မတက်ရဆိုသောအယူအဆများမှာ ဘုရားရှင်လက်ထက်က မရှိခဲ့ဘဲ၊ နှောင်းခေတ်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသောအယူအဆများသာ ဖြစ်နိုင်လေသည်၊၊
ရှေးခေတ် အိန္ဒိယအယူအဆ တစ်ခုတွင်လည်း အရွယ်ရောက်ပြီး အိမ်ထောင်မပြုသော(အပျိုကြီး) အမျိုးသ္မီးများကို “အမျိုးကို ယုတ်နိမ့်စေသူ”ဟု သဘောထားသတ်မှတ်ကြသည်၊၊ မိသားစုတွင် ကျွန်တစ်ဦးကဲ့သို့ ဆက်ဆံသည်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိရသည်၊၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မမှန်ကန်သည့် ဤအယူအဆကို ပယ်လှန်သည့်အနေဖြင့် “မဟာဝစ္ဆဂေါတ္တသုတ်”တွင် အမျိုးသ္မီးတစ်ဦးအနေဖြင့် အိမ်ထောင်မပြုလိုလျင် နေခွင့်ရှိကြောင်း၊ အမျိုးကိုယုတ်ညံ့စေသူ မဖြစ်ကြောင်းနှင့်၊ အပျိုကြီးဘ၀ ဖြင့်နေသဖြင့် “ဗြဟ္မစရိယ”ဟုခေါ်သော မြင့်မြတ်သည့်အကျင့်ကို အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသ္မီးများထက် ကျင့်ကြံရန် လွယ်ကူသူများဖြစ်ကြောင်း ချီးမွှန်းတော်မူပါသည်၊၊
ဤအထောက်အထားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သာမန်အမျိုးသ္မီးများအတွက်တင်မက အိမ်ထောင်မပြု လိုသည့်အမျိုးသ္မီးများ၊ အိမ်ထောင်ကျပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အိမ်ထောင်ပျက်ထားသော အမျိုးသ္မီးများအတွက်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၊ အလေးထားသည်ကို လေးနက်စွာတွေ့ရ ပါသည်၊၊ ဤသင်ကြားချက်များကို လေ့လာသောအားဖြင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် ဘာသာရေးသီးသန့်ဝါဒ သက်သက် မဟုတ်ဘဲ၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများကိုလည်း အလေးထားဟောပြောသည့် ဘာသာဝါဒဖြစ်သည်ကို တွေ့ရ မည်ဖြစ်သည်၊၊
မှန်သည်၊၊ အိမ်ထောင်မပြုသော အမျိုးသ္မီးနှင့်၊ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကွာရှင်းထားသောအမျိုးသ္မီးများသည် သာသနာဘောင်သို့၍၀င်၍ လောကုတ္တရာ တရားများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာကျင့်ခွင့်ရသည်၊ လူသာမန်ဘ၀ဖြင့် တရားဘာဝနာလိုက်စားမည်ဆိုကလည်း လွတ်လပ်စွာလိုက်စားခွင့်ကို အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသ္မီးများထက် ပို၍လွယ်ကူစွာရသည်မှာ ငြင်းရန်မရှိသောလွတ်လပ်မှု ဖြစ်ပါသည်၊၊
ထို့ပြင် အမျိုးသ္မီးများတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းရည်တူအရည်အသွေး (၅)မျိုးရှိကြောင်းကို “စိတ္တပရိယာဒါယ၀ဂ္ဂ၊ အဂုင်္တ္တရပါဠိ”တွင် ညွှန်ပြထားပါသည်၊၊ အမျိုးသ္မီးတို့၏ အမျိုးသားများနည်းတူ အရည်အသွေး ငါးမျိုးမှာ--
(၁) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အဆင်း၊
(၂) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အသံ၊
(၃) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အနံ့၊
(၄) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အနှစ်၊
(၅) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အတွေ့၊ တို့ဖြစ်ပါသည်၊၊
ယောကျာင်္းတစ်ဦးသည် မည်မျှစွမ်းရည်ပြည့်ဝသည်၊ အင်အားကြီးသည်ဆိုစေကာမူ အမျိုးသ္မီးတို့၏ အထက်ပါစွမ်းရည်များအောက်တွင် ဆွဲဆောင်မှုကိုခံကြရကြောင်း၊ ကျရှုံးကြရကြောင်း ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဟောတော်မူထားပါသည်၊၊ မျက်မှောက်ခေတ်နှင့်၊ ထိုထိုနိုင်ငံသမိုင်း များတွင်လည်း အထက်ပါ အမျိုးသ္မီးတို့၏ စွမ်းရည်အောက်တွင် အများသားခေါင်းဆောင်များစွာတို့ ဆွဲဆောင်မှုခံကြရ၊ ကျရှုံးကြ ရသည်ကို လေ့လာသောအားဖြင့် အထင်သေးအပ်သည့် စွမ်းရည်များမဟုတ်သည်ကို သတိချပ်အပ်သည်၊၊ အထက်ဖော်ပြပါစွမ်းရည်ငါးမျိုးမှာ အမျိုးသား များတွင်လည်း နည်းတူ တည်ရှိပါသည်၊၊
ထို့ပြင် အမျိုးသ္မီးများတွင် အမျိုးသားနည်းတူ တည်ရှိသောအခြားစွမ်းရည်ရှစ်မျိုးကိုလည်း ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည် “ဣတ္ထိဗန္ဓနသုတ်”တွင် ဟောတော် မူထားပါသေးသည်၊၊ စွမ်းရည်ရှစ်မျိုးမှာ--
(၂) အမျိုးသ္မီးတို့၏ ပြုံးရယ်မှု၊
(၃) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အပြောအဆို၊
(၄) အမျိုးသ္မီးတို့၏ တေးသီချင်း၊
(၅) အမျိုးသ္မီးတို့၏ မျက်ရည်၊
(၆) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အတွင်းသဘောထား၊
(၇) အမျိုးသ္မီးတို့၏ ပန်းနံ့သာပန်ဆင်မှု၊
(၈) အမျိုးသ္မီးတို့၏ အတွေ့အထိ၊ တို့ဖြစ်ကြသည်၊၊
အထက်တွင်တင်ပြထားသည့် စွမ်းရည်ရှစ်မျိုးမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသ္မီးတွင် တန်းရည်တူရှိသော စွမ်းရည်များဖြစ်ပါသည်၊၊ ဖော်ပြထားသည့် စွမ်းရည်များမှာ အမျိုးသ္မီးနှင့် အမျိုးသားတို့၏ သဘာဝ စွမ်းရည်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်၊ အမှန်တကယ်လည်း စွမ်းရည်ပြည့် အသုံးဝင်သော စွမ်းရည်များဖြစ် ကြောင်း လေ့လာသိရှိရသည်၊၊
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးသည် မိဘများကြောင့် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်သည်၊၊ အမျိုးသားချည်း လူ့အသိုင်း အ၀န်းကြီး မဖြစ်ပေါ်နိုင်သကဲ့သို့၊ အမျိုးသ္မီးချည်းလည်း လူလောကကို တည်ဆောက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ၊ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသ္မီးတို့မှာ အဆင့်တူအရေးပါသော လူသားအရင်းအမြစ် ဖြစ်သည်ဟုဆိုက သင့်တော်သည့်အဆိုဖြစ်သည်၊၊ အမျိုးသ္မီးများသည် အမျိုးသားလောက် အရေးပါမှုမရှိ၊ မြင့်မြတ်မှုမရှိဟု ဆိုလျင် ဘက်လိုက်သောအဆိုသာ ဖြစ်တော့သည်၊၊
ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည် “သုဗြဟ္မသုတ်၊ အဂုင်္တ္တရနိကာယ်”တွင် မိသားစုတစ်ခုတွင် မိခင်နှင့် ဖခင်တို့မှာ သား/ သမီးများအတွက် တန်းတူအဆင့်ရှိသည်ဟု ဟောပြောထားသည်ကို တွေ့ရသည်၊၊ ဤသုတ် တွင် “မိသားစုတွင် မိဘနှစ်ဦးလုံးကိုပင် မြင့်မြတ်သူများဖြစ်၍ ရှေးဦးဆရာဟူ၍၄င်း၊ ဗြဟ္မာကြီးများ ဟူ၍၄င်း၊ သား/ သမီးတို့၏အပူဇော်ကို ခံယူထိုက်သူများဟူ၍၄င်း” အထူးအဆင့်ရှိနေရာများတွင် တန်းတူထား၍ ဗုဒ္ဓရှင်တော် ဟောကြား တော်မူထားပါသည်၊၊
မိသားစုတစ်ခုတွင် အမျိုးသားထမ်းဆောင်ရသောတာဝန်နှင့် အမျိုးသ္မီးထမ်းဆောင်ရသော တာဝန်များသည် လေးနက်မှုအားဖြင့် တူညီသည်ကို တွေ့ရသည်၊၊ အမျိုးသားသည် စီးပွားရှာရသကဲ့သို့ အမျိုး သ္မီး၏ အိမ်တွင်းတာဝန်များသည်လည်း ပေါ့ပါးလှသည်မဟုတ်ပေ၊၊ ၀မ်းနည်းဖွယ် ကောင်းသည်မှာ အမျိုးသ္မီးများ၏ အိမ်တွင်းအလုပ်များသည် လေးနက်သည်မှန်သော်လည်း အမည်တပ်၍ပြစရာ မရှိဖြစ် နေတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်၊၊ မည်သို့ဆိုစေ အမျိုးသ္မီးများသည် အိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် အမျိုးသားနည်းတူ အဆင့်ရှိ၊ အရေးပါသောသူများ ဖြစ်တော့သည်၊၊
“ဒုတိယလောက ၀ိဇယသုတ်၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်”တွင် အမျိုးသ္မီးများမဖြစ်မနေ ထမ်းဆောင်နေရသည့် အိမ်ထောင်ရေးတာဝန် ရှစ်မျိုးကိုဖော်ပြ ထားသည်၊၊ “သိင်္ဂါလောက၀ါဒသုတ်”တွင်မူ အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သားနှစ်ဦးလုံးတို့၏ အိမ်ထောင်ရေးတာဝန်ငါးမျိုးစီကို ဖော်ပြထားသည်၊၊ အမျိုးသားများမခံစား ရဘဲ၊ အမျိုးသမီးများသီးသန့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် ခံစားကြရသောဒုက္ခငါးမျိုးကို “အာဝေနိက ဒုက္ခသုတ်”တွင် ဖော်ပြထားပါသည်၊၊
(၁) အိမ်ထောင်ပြုပြီးသော အမျိုးသ္မီးသည် မိဘကိုစွန့်ခွာ၍ အမျိုးသားအိမ်သို့လိုက်ပါရခြင်း၊
(၂) လစဉ်ဓမ္မတာ သွေးဆင်းရခြင်း၊
(၄) သား၊ သ္မီးမွေးဖွားရခြင်း၊
(၅) လင်ယောကျာင်္းအား ပြုစုရခြင်း၊ တို့ဖြစ်သည်၊၊
အာဝေနိက ဒုက္ခငါးမျိုးမှာ အမျိုးသ္မီးတစ်ယောက်အတွက် ဘ၀တစ်သက်တာ ခံစားရသောအဆုံး မသတ်သည့် ဆင်းရဲခြင်းများဖြစ်ပါသည်၊၊ အမျိုးသားများသည် အာဝေနိက-ဒုက္ခမှအခန့်သားကင်း လွတ်ခွင့်ရသူများပင် ဖြစ်သည်၊၊ အာဝေနိက ဒုက္ခမည်မျှအထိ ပင်ပမ်းဆင်းရဲသည်ကို အမျိုးသ္မီးများသာ သိနိုင်သည်၊၊ သို့သော် “ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် တစ်နေ့ကိုသုဿာန်သို့ မျက်စောင်း သုံးကြိမ်ထိုးသည်”ဟု မြန်မာရှေးရိုးစကားရှိသောကြောင့် ခန့်မှန်း၍ကားအမျိုးသားများပင် သိရှိနိုင်လေသည်၊၊
ဤမျှ ဘ၀တာဝန်အကြီးများကို ထမ်းဆောင်နေရသော အမျိုးသ္မီးများကို ဗုဒ္ဓရှင်တော်မှ အမျိုးသားများနှင့် အခွင့်အရေးတန်းတူ ပေးသနား တော်မူသည်မှာ လွန်စွာတရားမျှတသည်ဟု ဆိုရပါမည်၊၊ သို့သော် အမျိုးသ္မီးများအတွက် ၀မ်းနဲဖွယ်အကြောင်းတစ်ရပ်မှာ မည်သို့ပင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မှ နေရာပေး စေကာမူ ယေဘုယျ အမျိုးသ္မီးတို့၏ လူမှုအသိုင်းအ၀န်း အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်မှု၊ ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ မသင့်တော်မှုအချို့ကြောင့် အမျိုးသားနည်းတူအဆင့်တစ်ခုကို အပီအပြင်ရရှိရန်ကား ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသော အကျိုးတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်၊၊
သဘာဝအားဖြင့် အမျိုးသ္မီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလှအပကို ပို၍ခံစားတတ်သူ၊ မိမိအလှ အပကိုလည်း ပြတတ်သူများဖြစ်ပါသည်၊၊ သို့ပါလျက် မိမိအလှအပကိုလည်း ပြခွင့်မရ၊ သူတစ်းပါး အလှအပကိုလည်း လွတ်လပ်စွာခံစားခွင့်မရသော၊ တစ်ကိုယ်လုံးခြုံထားရသည့် အမျိုးသ္မီးများလည်း ယနေ့ခေတ်တိုင် ရှိနေပါသေးသည်၊၊
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် အမျိုးသ္မီးများအတွက် အမြင့်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုကို ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကိုယ်တိုင် ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်၊၊ ထိုအခွင့်အရေးမှာ အမျိုးသ္မီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သာသနာဘောင်တွင် ရဟန်း ပြုခွင့်ရနိုင်ပါသည်၊၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ပန်းတိုင်ဖြစ်သည့် ဈာန်၊ မဂ်၊ ဖိုလ်နှင့်၊ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်း အမျိုးသ္မီးများ ရရှိစံစားနိုင်ပါသည်၊၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သာသနာဘောင်တွင် အမျိုးသ္မီးများသည် “ဘိက္ခုနီ”ဟူသောအမည်ဖြင့် ရဟန်းပြုကြပြီး၊ ရဟန္တာမကြီးများဖြစ်သွားကြသည့် အမျိုးသ္မီးပေါင်းများစွာပင် ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က ရှိခဲ့ပါသည်၊၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့် အခြားထေရာဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများတွင် ယနေ့တိုင် “ဘိက္ခုနီသာသနာ” တည်ရှိ နေပါသေးသည်၊၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ဘိက္ခုနီသာသနာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ပြီး၊ အမျိုးသ္မီးများသည် သာသနာတော်တွင် “သီလရှင်”အမည်ဖြင့် သာ ကျန်ရှိနေပါတော့သည်၊၊ မည်သို့ဆိုစေ အမည်နာမ သည် အရေးကြီးလှသည် မဟုတ်ပါ၊ အကျင့် သိက္ခာများကို ကျင့်သုံးမှုသည်သာ ပဓာနဖြစ်ပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က အမျိုးသားများသည် အမျိုးသ္မီးရဟန်း ဘိက္ခုနီများကို အထင် သေးကြပါသည်၊ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်မှ ရဟန္တာဖြစ်ပြီးသော “မဟာပဇာပတိ ဂေါတမီဘိက္ခုနီ” အား ရဟန်းအမျိုးသ္မီးများကို အထင်သေးကြသည့်သူများအတွက် တန်ခိုးအမျိုးမျိုးကို ပြစေပါသည်၊၊ ‘ဂေါတမီ ဘိက္ခုနီ’သည် ကောင်းကင်သို့ဈာန်အဘိညာဉ်ဖြင့်တက်၍ ရေ-မီး-အစုံအစုံ တန်ခိုးအမျိုးမျိုးကို ဖန်ဆင်းပြပါသည်၊၊ ထိုအခါကြမှသာ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသ္မီးရဟန်းများကို ရှိခိုး၊ ဦးချရိုသေ လာခဲ့ကြပါသည်၊၊
တင်ပြခဲ့ပြီး အထက်ပါ သာဓက၊ ယုတ္တိ၊ သဘာဝများကိုထောက်ဆ၍ လေ့လာသုံးသပ်လျင် ဗုဒ္ဓဘာ သာသည် အမျိုးသ္မီးများကို အလေးထား ဆက်ဆံသော ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်၊၊ ထို့အပြင် အမျိုးသ္မီးများအတွက် အခွင့်အရေး၊ အဆင့်၊ နေရာအကောင်းဆုံးပေးသော ဘာသာတစ် ခုဖြစ်သည်မှာလည်း လက်တွေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်၊၊ မိမိရသည်အခွင့်အရေးကို အကောင်းဆုံးအသုံးချရန် သည်ကား အမျိုးသ္မီးများ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်၊၊
ယနေ့ခေတ်အခါတွင်မူ အမျိုးသ္မီး၊ အမျိုးသားခွဲခြားမှုသည် မရှိသလောက်ပပျောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်၊၊ နိုင်ငံအများတွင် အမျိုးသ္မီးခေါင်းဆောင် များပေါ်ထွက်လျက်ရှိပြီး၊ ပညာရေးနယ်ပယ်၊ စီးပွားရေးနယ် ပယ်၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်၊ ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အမျိုးသ္မီးများသည် အမျိုးသားနည်းတူ စွမ်းရည်ပြကြလျက်၊ အခွင့်အရေးတန်းတူရရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်၊၊ အမျိုးသ္မီး များအနေဖြင့် သည့်ထက်ပို၍ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြမည်ဆိုလျင် ပို၍ဘ၀မျက်နှာပန်းလှ ကြမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
Posted by ထွန်းထွန်းလင်း at 8:57 PM No comments:
ပါဠိမှအင်္ဂိလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးပညာရှင်များတွင် ပါဝင်သည့် တစ်ဦးသော သူမှာ နာမည်ကျော် ခရစ္စယာန် ဓမ္မ ဆရာကြီးတစ်ဦး၏ သားပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာထက် သူ၏ဘာသာက ပိုမို မြင့်မြတ်ကြောင်း သက်သေထူရန်ဖြစ်သည်။ သူ့ရည်မှန်းချက် အထမမြောက်ခဲ့သော်လည်း မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ကြီးမားသော . အောင်မြင်မှု ကို ရရှိလိုက်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာရခြင်းပင် ဖြစ်၏။
ဤလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရန် တွန်းအားပေး ခဲ့သည့် အခွင့်သင့်မှုကို ဘယ်သောအခါမှ မမေ့သင့်ပေ။ ယင်းဘာသာပြန်ဆိုမှု လုပ်ငန်းဖြင့် အနောက်နိုင်ငံသား . ထောင်ပေါင်းများစွာ တို့အား အဖိုး အနဂ္ဃထိုက်တန်သော ဓမ္မအကျိုးကို ရရှိစေခဲ့လေသည်။ ထိုပညာရှင်၏အမည်မှာ Dr.Phys Davids ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် အပြစ် ( sin ) နှင့်ပတ်သတ်သည့်အယူအဆမှာ အခြားသောဘာသာဝင်တို့၏ အယူအဆနှင့် ကွဲပြားသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အဖို့ ( sin ) ဟူသည် တွေဝေမိုက်မဲမှု ( မောဟ ) သာဖြစ်သည်။ ယုတ်မာသူ ဟူသည် အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်၊ ပြစ်တင်ရှုံ့ချရန်လိုအပ်သူ မဟုတ်ဘဲ လမ်းညွှန်မှုများများပေးရန်သာ လိုအပ်သူဖြစ်သည်။
သူ့ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သော ဖန်ဆင်းရှင် ( သို့ ) ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်များကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သူအဖြစ် သဘောမထားပေ။ ဘုရားသခင်၏ သနားကြင်နာမှုနှင့် ခွင့်လွှတ်မှုကို တောင်းပန်ရယူသူအဖြစ်လည်း မယူဆချေ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက် မိတ်သင်္ဂဟ များအနေဖြင့် လူနေမှု စနစ်အတိုင်း ဆင်ခြင်တိုင်းထွာတတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်သာ လိုသည်။ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူသည် ဘုရားသခင် ထံ တောင်းပန် အသနားခံရန် ဆုတောင်းဝတ်ပြု ကြိုးစားမှု တို့ဖြင့် အကုသိုလ်အကျိုးမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟု ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့က မယုံကြည်ပေ။
Posted by ထွန်းထွန်းလင်း at 8:54 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကမ္ဘာကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အတွေး အမြင် နှင့် မှတ်ချက်များ (၁)
(၂) ဗုဒ္ဓသည် ဘာသာပြောင်းသူများကို အနိုင်ယူရန် တရားဟောခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ တပည့်သာဝကတို့ကို အသိညဏ်အလင်းရရှိစေရန် တရားဟောခြင်းဖြစ်သည်။ (စာရေးဆရာတစ်ဦး)
ဒါ့ကြောင့် မသိမိုက်မဲမှုကိုသာ သတ်ပစ်ရမယ်၊ ကြိုးပေးရမယ်၊ ဘယ်လိုသတ်ဖြတ်ကြိုးပေးရမလဲ?
(၆) အနာဂါတ်ဘာသာတရားက သဘာဝလောကဓာတ်တခွင်လုံးအတွက် အဖြေပေးစွမ်းနိုင်သော အယူဝါဒတစ်ရပ်သာဖြစ်ရလိမ့်မည်။ အနှီးဘာသာသည် ပုဂ္ဂလအဓိဌာန်အယူအဆဖြင့် ဖန်တီးတီထွင်ထားသော ဖန်ဆင်ရှင်တရားနှင့် မသက်ဆိုင်စေသင့်။ တစ်ယူသန်အစွဲအလမ်းများနှင့် ယင်တို့မှ ပေါက်ဖွားခဲ့သော အကိူးအကြောင်းဆက်ပညာကိုလည်း ကျော်လွှားလွန်မြောက် ရလိမ့်မည်။ ထိုဘာသာတရားသည် သာဘာဝလောကဓာတ်(ရုပ်တရား)နှင့်တကွ နာမ်တရာများကို လွှမ်းခြုံ၍ ဒိဌဓမ္မဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရပေလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ထိုအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသည်ကို တွေ့ရ၏။ မျက်မှောက်ခေတ် သိပ္ပံပညာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်သောဘာသာတရားတစ်ခုရှိသည်ဆိုပါလျင် ထိုဘာသာတရားက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လိမ့်မည်။ (အိုင်စတိုင်းလ် - Albert Einstein)
(၇) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်ဘာသာသည် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ဘာသာဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကို မပြောလျှင်မဖြစ်ပြောပါဟု သင်ကကျွနုုပ်အား တိုက်တွန်းခဲ့သော် ကျွနုုပ်စိတ်ပါလက်ပါစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် "ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ဘာသာဖြစ်သည်" ဟု မဆိုင်းမတွ အဖြေပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုးလ် - Rabindranath Tagroe)
(၈) ဗုဒ္ဓ၏ကြီးမားသော အနှစ်နာခံမှု၊ စွန့်လွတ်မှုနှင့် ဘဝ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတို့ဖြင် ဟိန္ဒူဝါဒအပေါ်တွင် မပျက်ပြယ်နိုင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူဝါဒသည် ထိုမြတ်သောဆရာအား အနန္တကျေးဇူးကြွေးများ ပေးဆပ်ရန် ရှိနေပေသည်။ (မဟတ္တမဂန္ဒီ - Ghandi)
(၁၁) သန့်ရှင်းသော နည်းနာနိဿယနှင့် မြင့်မြတ်သောသင်ကြားမှုများမှာ တစ်စုံတစ်ရာသော အယူဝါဒကြီး တစ်ခုကမျှ အလွမ်းသင့်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ကူးယူကြရပေသည်။ (အိပ်ခ်ျဂျီဝဲလ် - H.G. Wells - ဗြိတိသျှသမိုင်းပညာရှင်)
(၁၂) ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ --- အရှင်ဘုရားဟောကြားတဲ့ ဒေသနာမှာရှိတဲ့ တခြားအရာတွေထက် အကြောင်းအရာ တစ်ခုအတွက်နှင့်ပဲ တပည့်တော် အရှင်ဘုရားရဲ့ တရားဒေသနာတော်ကို လေးစားမြတ်နိုးလှပါသည်။ အဲဒီအကြောင်းအရာဟာ ဘာလဲဆိုရင် တရားဒေသနာမှာ ပါတဲ့ အရာဝတ္ထုအားလုံးဟာ ပြတ်သားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလိုပင် ထင်ရှားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (ဟာမန်ဟက်စ် - ၁၈၈၇ - ၁၉၆၂ )
(၁၃) ပြစ်မူကျူးလွန်သူသည် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းပန်အသနားခံရန် ဆုတောင်းဝတ်ပြုကြိုးစားမူတို့ဖြင့် အကုသိုလ်ဆိုးကျိုးမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟု ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့က မယုံကြည်ချေ။ (ဂျွန်ဝေါလ်တားစ် - John Walters)
ကျွနုုပ်တို့ တတွေသည် ရုပ်ဝတ္ထုကြွယ်ဝမူ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့် ကြားတွင် စိတ်ဓာတ်ရေးရာအားဖြင့် ချွတ်ခြုံကျနေကြရပါသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုကြွယ်ဝသော်လည်း စိတ်ချမ်းသာမူ ကင်းသော အခြေအနေတွင် စိတ်၏ချမ်းသာမူ အမှန်တကယ်ရရန်အတွက် ဗုဒ္ဓ၏ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ကြည့်ဖို့သင့်လှပါသည်။ ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်သည် စိတ်ချမ်းသာမူကို အမှန်တကယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ဂျွန်ဝေါလ်တားစ် - John Walters)
(၁၇) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရားတီထွင်သူ ခေါင်းဆောင်အများစုမှာ မဟာခရီးသည်များဖြစ်ကြသည်။ ဘာသာတရားခေါင်းဆောင် ဓမ္မနာယကများထဲတွင် အကျင့်သိက္ခာ၊ ပညာညဏ်၊စဉ်းစားညဏ်၊ စိတ်နေသဘောထားအရာတို့၌ အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓသည် ခရီးသည်ဘုရင် ဖြစ်သည်။ (ရာဟုလာသံ ကစ္စည်း)
(၁၉) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတွင် ဒေါသအလျှံ ထွက်သောအခါဟူ၍ မည်သည့်အခါမျှ မရှိချေ။ ဘုရားရှင်၏ နှုတ်တော်မှ အကြင်နာမဲ့သောစကားထွက်ပေါ်လာသည်ဟူ၍ မည်သည့်အခါမျှ မရှိပေ။ (Dr. S. Radhakrishnan)
(၂၀) ရှည်လျားလှသည့် သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် အခြားဘာသာဝင်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဟူသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာမျှ မရှိပါပေ။ (ပါမောက္ခရီးစ်ဒေးဗစ် - Prof. Rhys Davids )
(၂၁) ဘာသာကို ကျုပ်လက်ခံယုံကြည်နိုင်ခြင်း မရှိပါ၊ သို့သော် ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများအနက်တစ်စုံတစ်ခုသော ဘာသာကို လက်ခံရန် အကြောင်းများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော် မိမိလက်ခံနိုင်မည့် ဘာသာတရားမှာ " ဗုဒ္ဓဘာသာ" ဖြစ်ပါသည်။ (Bertrand Russell, English Philosopher)
(၂၂) ဗုဒ္ဓဝါဒသည် ယုံကြည်မှုထက် သိမှုနှင့် ရှုမြင်မှုကိုသာ အဓိကထားသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှု (တရားတော်) များသည် "ဧဟိ ပဿိကော လာလှည့် ရှူလှည့်" ဟုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုသာ ပြု၍လာပြီး ယုံကြည်လော့ ဟုမဆိုပေ။ (ဆရာတော် ဒေါက်တာဝါပိုလာရာဟုလာ - Ven. Dr. W. Rahula)
(၂၃) ဗုဒ္ဓသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘုရားသခင် (သို့) နတ်ဘုရားများ၏ ကူညီမှု မြူတစ်စိမျှမပါဘဲ လူတိုင်းကိုယ်တိုင်ရယူနိုင်သည့် လွတ်မြောက်ရေးကို ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အဦးဆုံး ထုတ်ဖော်ကြေငြာခဲ့သည်။ (Prof. Eliot)
(၂၄) နှလုံးသားမှာ ချမ်းသာစေတဲ့ တရားမရှိလျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ မည်မျှပြည့်စုံစေကာမှု ချမ်းသာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ (ဒလိုင်လားမား - Dalai Lama)
(၂၅) လွတ်လပ်မှု မပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အမိန့်ဟာ ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှု ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အမိန့်မပါတဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာလည်း ဖရိုဖရဲ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လွတ်လပ်မှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ရမယ်။ ဖရိုဖရဲဖြစ်မှုကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ (ဒလိုင်လားမား - Dalai Lama)
(၂၆) ဤအရာ လူသားသစ်ပင်မှာ နှစ်ပေါင်းကုဋေ့ကုဋေ့တစ်ကြိမ်သာပွင့်ခဲ့တာ ပညာရနံ့ မေတ္တာပျားရည်စက်များလောကကို ပြည့်ဝစေတာလူသားပန်းတစ်ပွင့်ပါ။ (ဆာအက်ဒွင်အာနိုး - Sir Edwin Arnold)
(၂၉) များသောအားဖြင့် ဘာသာရေးဆရာ များသည် ၎င်းတို့၏တပည့်များကို အခြားဘာသာများနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် ကျမ်းစာများ၊ အယူဝါဒများ၊စာပေများကို ဖတ်ရှူလေ့လာခွင့် မပြုဘဲတားမြစ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒတွင် ဤအဖြစ်မျိုး လွန်စွာနည်းပါးပေသည်။ (ဖရခန္တီပါလော)
(၃၀) စွမ်းရည်သတ္တိ ဘယ်လောက်သိမ်ဖျင်းသူပင်ဖြစ်ပါစေ တရားတော်ရဲ့ တန်ခိုးကြောင့် သတ္တိဗျတ္တိ ပြည့်ဝလာစေပါတယ်။ အညံ့စားလူတစ်ဦးကို အတော်ဆုံးလူဖြစ်လာစေတာဟာ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါပဲ။ (ဂိုအင်ဂါ - SN Goenka)
Posted by ထွန်းထွန်းလင်း at 7:44 PM No comments:
အမျိုးသ္မီးများ၏ နေရာ အမျိုးသ္မီးများ...
ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တို့ မျက်လုံးထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာ...